Xa kwakukho izibane ezisemantla eSpeyin: zonke iimfihlo | I-Network Meteorology
IsiJamani sasePortillo | 20/06/2022 10:00 | Ukwahlulahlulahlula
Siyazi ukuba izibane ezisemantla zizinto ezenzeka ikakhulu kwindawo engasentla ye-hemisphere. Kwiindawo ezinjengeNorway, izibane zasentla zidla ngokubakho ngamaxesha athile onyaka. Nangona kunjalo, kwakukho izibane zasemantla eSpeyin ebudeni bemfazwe yamakhaya eyalothusa ilizwe lonke. Njengoko kulindelekile, sisiganeko okanye hayi kwaphela njengesiqhelo.
Kweli nqaku siza kukuxelela xa kwakukho izibane ezisenyakatho eSpain kunye nazo zonke iinkcukacha malunga nalo.
1 Yenzeka njani i-aurora borealis?
2 Yayikhona nini i-aurora borealis eSpain?
3 War Civil Lights Northern
4 AmaNgqina axa kwakukho izibane ezisemantla eSpeyin
5 Izibane zaseMantla kwenye indawo eYurophu
Yenzeka njani i-aurora borealis?
Izibane zaseMantla zinokubonwa njengokukhanya kwefluorescent okunokubonwa phezu kolundi. Isibhakabhaka sidaywe ngombala kwaye kubonakala ngathi yinto yomlingo ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ayingomlingo. Ubudlelwane obuthe ngqo kunye nomsebenzi welanga, ubume bomhlaba kunye neempawu ezikwi-atmosfere ngelo xesha.
Iindawo zehlabathi apho zinokubonwa zingaphezulu kwezibonda zoMhlaba. Izibane ezisemantla zenziwa ngokubulela kwibhombu ye-subatomic particles evela eLangeni kwenye yemisebenzi yayo eyaziwa ngokuba yizaqhwithi zelanga. Amasuntswana akhululwayo anemibala eyahlukeneyo ukusuka kwi-violet ukuya kubomvu. Njengoko zihamba emajukujukwini angaphandle, zibalekela kumhlaba wemagnethi woMhlaba kwaye zikhukuliseke. Esi sizathu sokuba ibonakale kuphela kwiipali zomhlaba.
Ii-electron ezivela kuzo Ukukhutshwa kwemitha yelanga ehlanganisiweyo kuvelisa ukukhutshwa okubonakalayo xa udibana nemagnetosphere. Kwi-magnetosphere kukho ubukho obukhulu beeathomu zegesi kwaye kungenxa yolu luhlu lwe-atmosfera ukuba ubomi bunokukhuselwa. Umoya welanga ubangela ukuvuseleleka kweeathom ezenza ukukhanya esikubona esibhakabhakeni. I-luminescence isasazeka de igubungele yonke i-horizon.
Akwaziwa kakuhle ukuba iZibane zaseMntla zinokuthi zenzeke nini, kuba izaqhwithi zelanga aziqondwa ngokupheleleyo. Kuqikelelwa ukuba zenzeka rhoqo emva kweminyaka eli-11, kodwa lixesha eliqikelelwayo. Ayaziwa ngokuthe ngqo ukuba i-aurora borealis iya kwenzeka nini ukuze ikwazi ukuyibona. Oku kungumqobo omkhulu xa kuziwa ekuboneni, ekubeni ukuhamba kwiipali kuyabiza kwaye ukuba awukwazi ukubona i-aurora phezu koko, kubi nakakhulu.
NgoJanuwari 25, 1938, ngoku kwiminyaka engama-75 eyadlulayo, kwenzeka i-aurora borealis eyayinokubonwa kulo lonke elaseYurophu. ISpeyin, phakathi kwemfazwe yamakhaya, iye yafumana iziganeko phakathi kokumangaliswa, ukudideka kunye noloyiko.
Umoya oqhubekayo wamasuntswana ukuba ukuvuthelwa lilanga kutshayela i-orbit yomhlaba kwaye inabela kwiindawo ezikude zesixokelelwano sezijikelezi-langa. Ngethuba lesiganeko, ukuqhuma okunobundlobongela kunye nokukhutshwa kwe-coronal mass ejections kwenzeka kwi-Sun, kwandisa kakhulu ubuninzi bezinto ezithathwe ngulo moya welanga. La ngamasuntswana ahlawuliswayo (i-electron kunye neeproton) ezithi, zakufika kwiplanethi yethu, zingene kwiatmosfera ngeepali ezilandela imigca yemagnethi yomhlaba.
Njengoko zihamba kwi-atmosfera yethu, la masuntswana avela elangeni angqubana neeathom kunye neemolekyuli ezisemoyeni, zithutha amandla azo kwizinto ezaziwa ngokuba yi-physics “njengeemeko ze-elektroniki ezichulumancisayo.” Ekubeni zonke iinkqubo zidla ngokufumana amandla aphantsi, iiathom kunye neemolekyuli ezisemoyeni zikhupha amandla agqithisileyo ngokukhupha ukukhanya okumibalabala. Ioksijini ikhupha ukukhanya okuluhlaza, okutyheli, nokubomvu, ngoxa initrogen ikhupha ukukhanya okuluhlaza.
Oku kukhanya kwenza omnye weyona mimanga mihle yendalo yesibhakabhaka ebusuku: Izibane zaseMantla. Ngenxa yendlela ezenza ngayo, ii-auroras zenzeka kwimimandla ekufutshane nezibonda zomhlaba, kwaye ziqhelekile. Ifomu kwizangqa ezingaqhelekanga phakathi kwe-65 kunye ne-75 degrees latitude, ebizwa ngokuba "yimimandla ye-aurora"«. IGreenland, iLapland, iAlaska, iAntarctica zezinye zeendawo apho i-auroras ixhaphake khona. Kwi-hemisphere esenyakatho, i-auroras ibizwa ngokuba "emantla" kwaye "emazantsi" emazantsi.
War Civil Lights Northern
Amakhonkco e-Auroral anokwandiswa ukuya kwizibanzi ezikufutshane ne-ikhweyitha xa ilanga lifumana ixesha lomsebenzi onzima obangela ukukhutshwa okunobundlobongela. I-Auroras kwiindawo eziphantsi ngolo hlobo zinqabile, kodwa zininzi iimeko ezibhalwe kakuhle. I-aurora entle yabonwa eHawaii ngoSeptemba 1859 kwaye isuka eSingapore ngo-1909. Ngomhla wama-20 kuNovemba ka-2003, izibane zaseMntla zajongwa kwinxalenye enkulu yeYurophu. Kwakhona eSpeyin ii<em>aurora zinqabile kangangokuba zimbalwa kuphela ezinokubonwa kwinkulungwane nganye.
NgoJanuwari 25, 1938, ebudeni beMfazwe Yamakhaya, izibane zasentla zabonakala kulo lonke usingasiqithi. Ukukhanya okubomvu, okubangelwa ikakhulu yi-helium kunye neoksijini kumoya osezantsi, kufikelele ubuninzi babo phakathi kwe-20: 00 p.m. kunye ne-03: 00 ekuseni nge-26.
AmaNgqina axa kwakukho izibane ezisemantla eSpeyin
Maninzi amangqina. UPaco Bellido ukhankanya ezinye zazo kwiblogi yakhe ethi «El beso de la Luna» kwaye igxininisa inkcazo kaJosé Luis Alcofar kwincwadi yakhe ethi «La aviation legionario en la Guerra Española». Ngokutsho kwe-Alcofar, ukubonakala kwezi zibane ezingaqhelekanga e-Barcelona emva kosuku lokuqhuma kwebhomu kwachaphazela kakhulu ukuziphatha kwemikhosi. Kweli nqaku, uJuan José Amores Liza ubhala ubungqina obuninzi obuqokelelwe e-Alicante. Iphephandaba le-ABC labika ngomhla we-26 ukuba eMadrid kwakucingelwa ukuba ngumlilo ode. Ekubeni ukuphuma kwelanga kunokubonwa kumntla-ntshona wesixeko, kukholelwa ukuba iintaba zePardo ziyavutha. Kodwa kungekudala kwafunyaniswa ukuba yayiyinto yemeteorological ngenxa yobude kunye nokwandiswa okukhulu kokukhanya.
UBawo uLuis Rhodes, owayengumlawuli we-Ebro Observatory, wapapasha inqaku lengcaciso kwi-Herald ngomhla wama-27, echaza i-aurora "njenge fan enkulu yokukhanya evula esibhakabhakeni ... isibonisi esinamandla sigxile kwindawo ephezulu. ” …
Izibane zaseMantla kwenye indawo eYurophu
Kwezinye iindawo ezininzi zaseYurophu, ukusuka eParis ukuya eVienna, ukusuka eSkotlani ukuya eSicily, ukubonakala kwe<em>aurora kuye kwavelisa amabali amaninzi. Kwiindawo ezininzi, abacimi-mlilo baxelelwa ukuba ngumlilo. Le nto yabonwa naseBermuda, apho kwakukholelwa ukuba yinqanawa esitshayo. EUnited States, izaqhwithi zelanga ziye zaluvala unxibelelwano lukanomathotholo olufutshane.
Kwamanye abefundisi bamaKatolika, Ukusa kwe-1938 kunxulunyaniswa nesiprofeto seNkosikazi yethu yaseFatima. Kwimfihlelo yesibini, abantwana bathi bayifumene kwiNtombi Enyulu ngoJulayi 13, 1917, kwaye inokufundwa ngolu hlobo: «Xa ubona ubusuku bukhanyiswa kukukhanya okungaziwayo, yazi ukuba kungenxa yokuba umqondiso wakho omkhulu ungaphakathi. Igama likaThixo eliya kohlwaya ihlabathi ngenxa yezono zalo ngeemfazwe, iindlala… Ewe, abanye abantu bawubonile umqondiso omkhulu kwi-aurora eyabhengeza iMfazwe Yehlabathi II, ngoko esi saqhwithi selanga ngamanye amaxesha sibizwa ngokuba “yiNkanyamba yeFatima”.
Ngaphandle kokutolika kwenkolo yeenkolelo kunye nokutolika, ekuqaleni kowe-1938 yaba sisiganeko esikhethekileyo kwiMfazwe Yamakhaya yaseSpeyin. Isiganeko esidlulayo esinokwenza ubani akhangele eZulwini, abanye bathabatheke, abanye boyike, yaye abaninzi bakholelwa ukuba kwaneZulu licatshukiswa bubundlavini bemfazwe.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokuba kwakukho izibane ezisemantla eSpeyin.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » Zemozulu » Ukwahlulahlulahlula » Yayikhona nini i-aurora borealis eSpain?